Friday, 02 March 2018 21:41
- हरि भट्टराई /बेल्जियम
“८ मार्च” अर्थात् श्रमिक महिलाहरूको संघर्षको गाथा बोकेको दिन। यस दिनलाई संसारभरीका श्रमजीवी महिलाहरूले विशेष रूपमा स्मरण गर्दै आएका छन्। यस वर्ष पनि संसारभरीका श्रमजीवी महिलाहरूले “८ मार्च” मनाउने तरखर गर्दै छन् । १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश संसारभरीका महिलाहरुले जस्तै नेपालबाट बेल्जियम पलायन भएका महिलाहरुको साझा संगठन गैह्र आबासिय महिला मंचले पनि मनाउदै छन । विश्व भर विभिन्न महिला संगठनहरूले भने कतै संयुक्त रूपमा त कतै एकलरूपमै विविध कार्यक्रम गरी मंगलबार देशव्यापी रूपमा “अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस” मनाउन तयारि गर्दै छन् ।
प्रवासी महिला मंच, जनप्रगतिशिल महिला मंच,एनआरएन महिला फोरम, जना सम्पर्क महिला संघ, प्रजातान्त्रिक महिला संघ सहितका विभिन्न महिला संगठनहरूले गैह्र आबासिय महिला मंच मार्फत एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी श्रमिक महिला दिवस मनाउने निर्णय भैसकेको छ । “प्रेश फर प्रोग्रेस ” विषयक सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम nationalestraat 40 ,2000 सभाहलमा गर्न लागिएको हो । सो अन्तर्क्रियामा मन्तव्य राख्ने महिला नेत्रीहरुलाई महिला अधिकार, चुनौती , इतिहाँस आदिबारे फरक फरक बिषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल चलाउन अनुरोध गरिने छ। जसबाट महिलाहरुको कानुनि , लैंगिक र जातिय विभेद संगसंगै अन्य समस्याबारे तर्कसंगत निराकरणको लागि निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने हामि सबैको ठम्याई हो । महिला मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै जोडेर लैजानु पर्छ भन्ने तर्क पनि एकातर्फा उठिरहेको देखिन्छ भने जातिय, लैंगिक र अन्धबिस्वासका समस्याहरु वर्गसंग मात्र हैन चेतनास्तर र शिक्षासंग सम्बन्धित छन् भन्ने सवाल पनि अर्को तर्फ छ । यी सबै तर्कमा केहिन केहि सत्यता अवस्य रहेको देखिन्छ।
भन्नै पर्छ केहि रुपमा हामीले राज्यबाट समेत विभेदको सामना गरिरहेका छौ। जस्तो कि आज विश्वका ६७ देशका कानुनले महिलालाई समान ज्याला दिनुपर्छ भन्छ। १२६ देशले सुत्केरी बिदा सुनिश्चित गरेको छ। ब्याबहारमा बिकसित देश बाहेक अल्प बिकसित देशमा त्यो देखिदैन। राजनीतिमा, प्रशासनमा र संघिय प्रदेशको मन्त्रालयमा समत सहभागिताको कुरालाई हेर्दा यो निष्कर्स निकाल्न सकिन्छ।
हामि महिलाहरुले हाम्रा पक्ष र बिपक्षमा भए गरेका डाटातर्फ ध्यान दिदै गम्भीर तरिकाले मनन गर्न जरुरि छ। के विकसित एवम् औद्योगिक देशका महिला स्वतन्त्र छन्? के तिनीहरू रोजगारीको समान अवसर पाउँछन्? के ती महिलाहरु केटाकेटी जन्माउन र त्यसपछि निरन्तर काम गर्न स्वतन्त्र छन्? विकसित देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'आर्थिक सहकार्य एवम् विकास संस्था' (ओईसीडी) का ३४ देशमा पुरुष र महिलाको पारिश्रमिकमा १७.६ प्रतिशत फरक छ। मध्यपूर्वमा ३० प्रतिशतभन्दा कम महिला रोजगार छन्। एक वर्ष अघिभन्दा आजको लिवियाली महिलाको स्थिति झन् नाजुक छ। संसारको सम्पत्तिमा ९९ प्रतिशत पुरुषको स्वामित्वमा छ जब कि महिलामा १ प्रतिशत। संसारको ९० प्रतिशत आयुको हकदार पुरुष हो भने महिलाको १० प्रतिशत। यौन हिंसाका शिकारमा १० देखि २७ प्रतिशत महिला छन्। मानव बेचबिखनमा ८० प्रतिशत महिला पर्छन्। हरेक वर्ष ६ करोड केटीहरूको जबरजस्ती बालविवाह हुन्छ। युरोपेली सङ्घका देशहरू, जसले आफूलाई अत्यन्तै सभ्य ठान्छन्, त्यहाँ ४० देखि ५० प्रतिशत महिला आफ्नो कार्यस्थलमै यौन शोषणको शिकार हुन्छन्। विश्वका २५ प्रतिशत महिला शारीरिक एवम् यौन शोषणबाट पीडित हुन्छन्। मानव अधिकार र महिला स्वतन्त्रताको पहरेदार ठान्ने संरा अमेरिकामा हरेक ९ सेकेण्डमा एक महिला पुरुषको यातनाको शिकार हुन्छ। विश्वमै घरेलु हिंसाका घटनामा परेका २० प्रतिशतको मात्र अभिलेखमा राखिएको तथ्यले हिंसा शिकारको सङ्ख्या अझ कति धेरै हुन्छ भन्ने अन्दाजमात्र गर्न सकिन्छ। यो नै आजको महिलामाथि भएको अत्याचारको तथ्यगत प्रमाण हो महिला साथीहरु।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर महासङ्घद्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार महिलालाई आफ्नो सहकर्मी पुरुषलाई भन्दा ज्यालामा कम्तीमा १८ प्रतिशत कम दिइन्छ। प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा पुरुष र महिलाको पारिश्रमिकमा सन् २००५ मा १९ प्रतिशत फरक थियो भने हाल बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिवेदनमै माध्यमिक शिक्षा प्राप्त ३० वर्षका पुरुष मजदुरहरूले उस्तै खाले महिलाको आम्दानीभन्दा ४८ प्रतिशत बढी कमाइ गर्छन् भने उच्च शिक्षा हासिल ३० वर्षका पुरुषहरूले महिलाले भन्दा ३७ प्रतिशत बढी कमाइ गर्छन्। के सं रा. अमेरिकाले मानव अधिकारको व्याख्या गर्दा महिला–पुरुषको ज्याला फरक हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ? स्वाभाविक प्रश्न छ।
अर्को तथ्य हेरौ। सन् २०११ डिसेम्बरमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधि प्रतिशतको आधारमा समाजवादी क्युवा तेस्रो स्थानमा छ। अमेरिकी महादेशहरूमै संरा अमेरिका ७८ औं स्थानमा छ। संरा अमेरिकाको तल्लो सदनमा १६.८ प्रतिशत र सिनेटमा १७ प्रतिशत सांसद महिला छन्।
पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ महिलाको स्थितिबारे जतिसुकै भ्रम फैलाए तापनि तथ्यले स्पष्ट पार्छ। चीनको संसदमा २२ प्रतिशत महिला छन्। सन् २०१० अक्टोबरको तथ्याङ्कअनुसार चीनमा १ अर्ब ३७ करोड मजदुर महिला छन् (यो सङ्ख्या कूल मजदुरको ४२.७ प्रतिशत हो)। जब कि सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्ति ताका यो सङ्ख्या ६ लाख १० हजार (जुन कूलमा ७.५ प्रतिशत) महिला थियो। चिनियाँ क्रान्तिले महिलाको आयुदर ७५ पुर्‍याएको छ, जबकि सन् १९५० मा त्यसको आधामात्र थियो।
सन् १९५९ को क्रान्तिपूर्व ल्याटिन अमेरिकीमात्र होइन बाँकी विश्वका महिलाजस्तै सामन्तवादी एवम् पितृसत्तात्मक समाजबाट क्युवाली महिला पीडित थिए। महिला दोस्रो दर्जाकै नागरिक बन्न विवस थिए। आजको तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ क्युवाली महिलाको स्थिति। क्युवाको श्रम शक्तिमा ६६ प्रतिशत महिला छन्, ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीमा महिला नै छन्। शिक्षण पेशामा महिलाको सङ््ख्या बढी छ। ७२ प्रतिशत शिक्षकमा महिला नै छन्। क्रान्तिपूर्व २ हजार जनामात्र नर्स थिए भने अहिले ७९ हजारको सङ्ख्या पुगेको छ। ५१ प्रतिशत डाक्टर, ४३ प्रतिशत वैज्ञानिक, ३३ प्रतिशत प्रबन्धक, ७० प्रतिशत बैङ्क कारिन्दा महिला हुनुले समाजवादी क्रान्तिको उपादेयतालाई प्रस्ट पार्छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा क्युवाली महिला कुनै पनि अति विकसित पूँजीवादी देशभन्दा कम छैन भन्ने तथ्याङ्कले नै भन्छ। ६२ प्रतिशत विश्वविद्यालय विद्यार्थीमा महिला छन्। ४९.५ प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण महिला छन्, विज्ञान सङ्कायमा ५० प्रतिशत महिला छन् भने समाजशास्त्र, मानविकी, चिकित्सा विज्ञान र शिक्षाशास्त्रमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी महिला छन्।
राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलाको शक्ति कम छैन। क्युवाको राष्ट्रिय सभामा महिलाको उपस्थितिको हिसाबमा विश्वमै पाँचौं स्थानमा छन् – क्युवाली महिला। ३६ प्रतिशत सांसद राष्ट्रियसभामा उपस्थित छन्। १८ प्रतिशत मन्त्रिमण्डलमा, २३ प्रतिशत सहायकमन्त्री महिला छन्। प्रान्तीय सभामा ३१ प्रतिशत प्रतिनिधि महिला छन्। ६२ प्रतिशत वकिल, ४९ प्रतिशत न्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतको ४७ प्रतिशत न्यायाधीश महिला छन्। क्युवाली सैन्य शक्तिमा २० प्रतिशत अधिकारी तहमा महिला छन्। परिवार नियोजनलाई महिलाको मौलिक अधिकार मानिन्छ। ७७ प्रतिशत क्युवाली महिला कुनै प्रकारको परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्छन् जबकि संरा अमेरिकामा ७६ प्रतिशतमात्र छ। आयुदर ल्याटिन अमेरिकामै सबभन्दा बढी क्युवाली महिलाकै छ। यो अनुमानित तथ्य नभएर सर्वस्वीकार्य तथ्य हो साथीहरु।
नेपालको अवस्था हेरौ त ? हामी शिक्षित कहलिएका महिला अन्याय र शोषणको कुरा गर्छाैं तर एकजुट हुन हच्किन्छौं। समान कामको निम्ति समान ज्याला चाहियो, सुत्केरी बिदा चाहियो, दसौं वर्षदेखि हामी अस्थायी भयौं, ज्यालादारीमै जागिरको जीवन बित्ने भयो, सुत्केरी भएपछि जागिरबाटै हात धुनुपर्‍यो, महिलाको कामको मूल्याङ्कन गरिएन, महिलालाई मुख्य जिम्मेवारी दिने विश्वास गरिएन, कार्यालयमै हामीलाई तल्लो दुर्व्यवहार भयो, घरको जिम्मेवारीले हामीले पढ्ने–लेख्ने अवसर गुमायौं आदि आवाज हामी महिला समय–समयमा उठाउँछौं तर आफ्नो हक–अधिकार स्थापित गर्न अग्रसर हुँदैनौं।
महिला सङ्घ–सङ्गठन भनेपछि हामी आफै नाक खुम्च्याउँछौं, जुलुस–प्रदर्शनमा सहभागी हुँदैनौं, आफ्नो कार्यालय वा कारखानाका समस्याबारे आवाज उठाउँदैनौं, बैठक वा सभा–समारोह हुँदा हामी आफै भागी भागी हिंड्छौं वा फुर्सद नभएको बहाना बनाउँछौं, महिलाले नै महिलालाई हेलाहोचो गर्छाैं, अनि दुःख भयो भनेर आफै कराउँछौं। आफ्नो कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गरौं। महिलाको हक–अधिकार अरुले ल्याइदिने होइन, महिलाकै पहल वा सक्रियताबाट मात्र महिला मुक्ति सम्भव छ। शोषणका सम्पूर्ण पर्दा हटाउन राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित भई महिलामाथिको अन्य विभेद संगसंगै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई साथै लानु आजको एउटै विकल्प हो। हाम्रो बर्गीय धरातल फेरिने हो भने नत हामि खाडीमा बेचिएर अनिच्छुक यौन पिडा सहदै नोलर सरह काममा जोतिनु पर्थ्यो न बिदेशी जेलमा डोल्मा बनेर सहयोगको याचना गर्नु पर्थ्यो। आज एउटी चेली छाउपडिको सिकार भएर मर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? भारतीय कोठीहरुमा हाम्रा चेलीहरुले किन नारकीय जिबन गुजार्नु परेको छ ? के कारणले बाउले छोरी बेच्दै छ ? किन बोक्सीको आरोपमा काठमाडौँ स्वयम्भु किमडोलकै प्रमिला शाक्य, सिमराढी निवासी ६० वर्षीया बृद्धा जानकी देवी कापडलाई १० बर्षसम्म यातना दिदा छिमेकी दिदीबैनी र दाजुहरुले रमिता हेरेर बसे? अत्तरिया नगरपालिका घुरसुवा गाउँकी राजकुमारी रानालाई त बोक्सीको आरोपमा ज्यान समेत लिइयो । तर समाज पटकपटक उस्तै छ किन ? नत अहिलेसम्मका परिवर्तनले यसको उत्तर दिएको छ नत समाज र राज्य नै यी महिला उत्पीडनहरुमा गम्भीर ढंगले उत्तरदायी बनेको छ।
अत अबका कार्यक्रमहरु केवल क्लारा जेद्किन , रोजा लग्जेम्बर्ग, लुइस जेइट्स र लिओन त्रोसकी जस्ता धर्तीका महान छोरीहरुको नाम घोक्नका लागी मात्र यो पर्व महिलाको बिजय उत्सबको रुपमा मनाएर केहि अर्थ छैन। उनीहरुले देखाएको बाटो "समस्या थुपार्न हैन संसार बदल्न कम्मर कस नारीहरु " बाट मात्रै हाम्रो मुक्ति सम्भब छ। त्यो मुक्ति भनेको जातिय, धार्मिक, सामाजिक,मनोबैज्ञानिक, लैंगिक र बर्गीय मुक्ति हो। हाम्रो सरोकार बदल्नुसंग हुनुपर्छ समस्याबाट भाग्नु र समस्या थुपार्नुसंग हैन। हामीले आजैबाट संकल्प गरौ हामि एक्सनमा पक्कै जाने छौ। हामि आफुलाई बदल्ने, समाजको नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, राज्यको विभेदकारी न्याय ब्याबस्था ज्याला ब्याबस्थालाइ बदल्ने र संसार बदल्ने एक्सनबाट कदापि भाग्ने छैनौ । हाम्रो महान पर्व ८ मार्च जिन्दाबाद ! हाम्रा महान नेतृहरु रोजा , क्लारा लगायात अमर शहिदहरु अमर रहुन !! (लेखिका एनआरएनए महिला फोरम बेल्जियम कि संयोजक तथा बाम पन्थी नेत्री समेत हुनुहुन्छ)
More in this category: « कसरी जाउँ कामरेड शहीदको घरमा ?	भ्रष्टाचारले थलिएको गैंडाकोटको शंख देबी स्कुल (वृत्त) »